नरेन्द्र मोदीको ‘मन की बात’ कार्यक्रम लाई युट्युबमा लाइकभन्दा डिस्लाइक बढी ! – Namaste Dainik
नरेन्द्र मोदीको ‘मन की बात’ कार्यक्रम लाई युट्युबमा लाइकभन्दा डिस्लाइक बढी !
August 31, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नरेन्द्र मोदीको ‘मन की बात’ कार्यक्रम लाई युट्युबमा लाइकभन्दा डिस्लाइक बढी !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मन की बात’ कार्यक्रम इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण चर्चामा आएको छ ।
आकाशवाणीमा प्रत्येक आइतबार प्रशारण भइरहेको यो कार्यक्रमलाई दूरदर्शनबाहेक थुप्रै नीजि च्यानलले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छ ।
यसका साथै पिआइबी, बिजेपी र मोदीको युट्युब च्यानलमा पनि उक्त कार्यक्रम हेर्न सकिन्छ । तर यो आइतबारको मनकी बातको विषयमा यी युट्युब च्यानलमा प्रयोगकर्ताले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया बढी दिएका छन् । यी तीनै स्थानमा मनकी बातको भिडियोमा लाइक्सको तुलनामा डिस्लाइक बढी छ । यो कुरालाई असामान्य मानिँदै छ किनभने यसअघि उक्त कार्यक्रमको विषयमा दर्शकको दृष्टिकोण खासै नकारात्मक थिएन । यस्तोमा यसको कारण के हुनसक्ला भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।
कस्तो छ स्थिती ?
यो आइतबार मनकी बातको भिडियो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया सुरुदेखि नै सुस्त रह्यो । कार्यक्रमको प्रसारण बिहान भएको थियो तर अबेर रातीसम्म स्थितीमा सुधार हुन सकेन । खबर लेख्दासम्म भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा यो कार्यक्रमको लगभग पाँच लाख भ्यूज थिए ।
यो च्यानलमा यो भिडियोलाई १० हजार मानिसहरुले लाइक गरेका थिए जबकि १ लाख ८१ हजारले डिस्लाइक गरेका थिए । यो निकै ठूलो अन्तर हो । यसै गरी मोदीको आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि यसका ४ लाख ९० हजार भ्यूज थिए । यो भिडियोमा १९ हजार लाइक र ३५ हजार डिसलाइक थिए । यसै गरी पिआइबीको युट्युब च्यानलमा ९१ हजार भ्यूज थियो जबकी लाइक ३.२ हजार थियो भने डिसलाइक १० हजार थिए ।
सम्बोधनमा के भनेका थिए मोदीले ?
हरेक पटक भिन्न भिन्न विषयमा कुरा गर्ने मोदीले यसपटक ओणम पर्वको कुरा गरे र भारतीय उद्यमीले खेलौनाको व्यवसायमा सम्भावना खोज्न सुझाव दिए । मोदीले स्वदेशी खेलौनाको निर्माणमा जोड दिँदै भने, ‘ग्लोबल टोय इन्डष्टि ७ लाख करोड भारुभन्दा पनि बढी छ तर यति ठूलो कारोबारमा भारतको हिस्सा निकै कम छ ।’
यसका साथै मोदीले डेभलपर्सले भारतमा कम्प्युटर गेम्स बनाउनु पर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘हाम्रो देशमा आइडिया र कन्सेप्ट छ । भर्चुअल गेम र खेलौनाको क्षेत्रमा पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु छ र अब सबैले लोकल खेलौनाका लागि भोकल हुनेबेला आएको छ ।’
आँ’धीरातमा वि’वाहित प्रे’मिकालाई भे’ट्न ग’एका प्रे’मीलाई ओ’छ्यानबाटै नि’र्वस्त्र स’मातेर…
श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय
नेपाल एयरलाइन्सले तोक्यो नियमित उडानको भाडा (सूचीसहित)
September 2, 2020 September 2, 2020 Namastedainik
एमसीसी संशोधनसहित अनुमोदन गर्न नेकपा अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव
बालकलाई सर्पले टोकेपछि मोटरसाइकलमा अस्पताल लाँदै थिए, दुर्घटनामा परी दुईजनाकै ज्यान गयो !
August 30, 2020 August 30, 2020 Namastedainik